चालक आन्दोलित हुँदा यात्रु अलपत्र ! स्वदेश फर्कंदै गरेका यात्रु नेपालगञ्जमानै अड्किए !
असोज ०४, २०७५ रासस
नेपालगञ्ज, बाँके, सार्वजनिक यातायातका चालकको आन्दोलनका कारण भारतबाट स्वदेश फर्कंदै गरेका यात्रु नेपालगञ्जमा अलपत्र परेका छन् ।
भारतमा रोजगार गरी पर्व मनाउन घर फर्कंदै गरेका प्रदेश नं ५ र कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लाका सर्वसाधारण तीन दिनदेखि नेपालगञ्जमा अलपत्र परेका हुन् । नेपालगञ्ज बसपार्कमा बस चल्ने आशामा यात्रु दिनभर धाउने गरेका छन् ।
बस सञ्चालन नहुँदा घर जान नपाएको जाजरकोट भेरीगङ्गा नगरपालिकाका शिवकुमार वलीले बताउनुभयो । भारतबाट घर जाने र उपचारका लागि नेपालगञ्ज आएका सर्वसाधारण गाडी नचलेका कारण अलपत्र परेको वलीले जानकारी दिनुभयो ।
सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नगरेर घरमै थन्काउँदा सयौँको सङ्ख्यामा यात्रु गन्तव्यमा पुग्न नसकेर नेपालगञ्जमै अलपत्र परिरहेको भेरी अञ्चल यातायात व्यवसायी सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शोभाखर पौडेलले बताउनुभयो ।
चालक र मालिक आफैँ भएका सार्वजनिक बस फाट्टफुट्ट सञ्चालनमा आए पनि अन्य बस सञ्चालन गर्न चालकले नमानेको उहाँले बताउनुभयो । दिनभर यात्रुलाई जम्मा गरे पनि अन्तिममा चालकले गाडी चलाउन इन्कार गर्ने गरेको पौडेलको भनाइ छ ।
सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेको भन्दै असोज १ गतेदेखि चालक आन्दोलित भएका हुन् । नेपाल स्वतन्त्र सवारी चालक सङ्घर्ष समितिको बन्द आह्वान भनिए पनि नेपालगञ्जमा आन्दोलन नेतृत्वविहीन छ । “यहाँ कसैले चला वा नचला भन्ने भन्दापनि स्वस्फूर्तरुपमा बन्द भएको छ । केन्द्रबाट पर्चा, पम्प्लेट बाँडेकाले नचलाएका हुन्”, चालक इन्द्र थापाले भन्नुभयो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ चालकमैत्री नभएकाले चालकहरु आन्दोलनमा उत्रिनु परेको उहाँले बताउनुभयो ।
भेरी यातायात प्रालिका महासचिव उमेश गुरागार्इंले सार्वजनिक यातायातका चालकको आन्दोलनका कारण पर्वको मुखमा व्यवसायी पीडित भएको बताउनुभयो । यात्रुको चाप हुने बेला गरिएको आन्दोलनले यात्रुसँगै व्यवसायीसमेत पीडित हुनु परेको उहाँको भनाइ छ । व्यवसायी र सङ्घ–संस्थासँग समन्वय नगरी गरिएको चालकको आन्दोलन निष्कर्षमा पुग्न कठिन देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रकाशित : बिहिबार, असोज ०४, २०७५१९:३०
दिनदहाडै हत्या भएका अन्सारीको हत्याराको विषयमा गृहमन्त्री थापाको कठोर प्रण !
भारतमा तहल्का मच्चाइरहेकी मेनुका पौडेललाई जिताउन आर्थिक सहयोग !
दोहाबाट आएको विमान सिमरामा ५ र काठमाडौँमा ३ फन्को पछि मात्रै सफल अवतरण !
धरानका मेयर तारा सुब्बाको असमाहिक निधन !
राति सडकमा हिंडीरहेका पैदलयात्रीलाई बसले ठक्कर दिँदा घटनास्थलमै मृत्यु !
प्रहरी मेसमा पुगेर गृहमन्त्रीले हामीलार्इ नी खाना छ भनेर साेधेपछि…….
आमासँग विवाद हुँदा छोरीले आफ्नै शरीरमा मट्टितेल छर्किएर आगो लगाएपछि…